မြန်မာ့စာတိုက် လုပ်ငန်းနှင် Za Information Technology တို့ ပူးပေါင်းပြီး အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ဈေးရောင်းဝယ?? - Yangon Media Group
မြန်မာ့စာတိုက် လုပ်ငန်းနှင် Za Information Technology တို့ ပူးပေါင်းပြီး အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ဈေးရောင်းဝယ??
မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်းနှင့် ပုဂ္ဂလိကနည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သော Za Information Technology တို့ ပထမဆုံးအနေဖြင့် အကျိုးတူပူး ပေါင်းကာ အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ဈေးရောင်းဝယ်သည့် ECommerce Platform ကို စတင်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်းနှင့် Za Information Technology တို့ ပူးပေါင်း၍ MARKETLACE BY MYANMAR PO ST ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ဆောင်ရွက် ခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်း E-Commerce Platform လုပ်ငန်းကို မတ်လ ၁ ရက်တွင် စတင်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ် ကြောင်း Za Information Technology မှ MD ဦးဇော်မင်းအောင်က ပြောသည်။
”အွန်လိုင်းရှော့ပင်းနဲ့ E-Commerce နဲ့ကို မကွဲပြားကြဘူး။ဖုန်းနဲ့ဈေးရောင်းတာဖြစ်ဖြစ် အီး မေးလ်နဲ့ အရောင်းအဝယ်လုပ်တာ ဖြစ်ဖြစ် ဒါတွေအားလုံးကို E-Commerce လို့ ခေါ်တယ်။ အွန်လိုင်း ရှော့ပင်းဆိုတာက အွန်လိုင်းမှာ ဈေးဝယ်လို့ရတဲ့နေရာတစ်ခုဆိုပြီး ကွဲပြားကြတယ်။ အွန်လိုင်းရှော့ပင်း အားလုံး E-Commerce ထဲ အကျုံးဝင်တယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်။” ဟု ၎င်းက ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်က ပြောသည်။ အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ရောင်းချသော ထုတ်ကုန်/သွင်းကုန်များ မှန်ကန်မှုရှိစေရန်ရောင်းချသူများ၏ လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့် သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းအ ထောက်အထားများကို မြန်မာ့စာ တိုက်လုပ်ငန်းမှ အဆင့်ဆင့်စိစစ် ပြီးမှသာ ယင်းဝက်ဘ်ဆိုက်အတွင်း ဝင်ရောက်ရောင်းချခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်းမှ အထွေထွေမန်နေဂျာ ဒေါ်ငုသီတာက ပြောသည်။
”ဒီမှာ ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်မယ့် အွန်လိုင်းရှော့ပင်းလုပ်ငန်း ရှင်အနေနဲ့ ရောင်းသူဆီကိုရောက် အောင် မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်းက နေ တာဝန်ယူပို့ပေးမယ်။ ပစ္စည်းပို့ခကို ရောင်းသူကပေးရမယ်။ ဝယ်သူဆီကငွေကို စာပို့သမားက ယူလာပြီး ရောင်းသူဆီကို စာတိုက်ကနေ ငွေပြန်ပေးတဲ့ပုံစံနဲ့ ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်မှ ကုန်စည်းများကို ဝယ်မည့်သူများသည် ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် ကြေညာထားသည့် ရောင်းချသူ၏ဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဖုန်းဖြင့်တိုက်ရိုက်ခေါ်ဆို ဝယ်ယူခြင်း၊ မိုဘိုင်းအပလီကေး ရှင်းမှဖြစ်စေရောင်းသူထံသို့ တိုက်ရိုက်ခေါ်ဆိုဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ကာ ဝယ်သူများသည်ရောင်းသူထံ လိပ်စာအတိအကျပေးရမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်းအ နေဖြင့် အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့် အရောင်းအဝယ်ဝင်ရောက် ဆောင်ရွက်သော ရောင်းသူနှင့်ဝယ် သူများအကြား မှန်ကန်ခိုင်မာမှုရှိ စေရန်အတွက် ဝယ်သူများထံသို့ ရောင်းကုန်ပစ္စည်းများကို ပို့ဆောင် ပေးခြင်းနှင့် ဝယ်သူထံမှငွေကောက်ခံပေးခြင်း အခန်းကဏ္ဍကိုသာ အဓိ က ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ Za Information Techno logy ဝက်ဘ်ဆိုက်အတွင်း ဝင် ရောက်ရောင်းချလိုသူများ၏ ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းများကို ထည့်သွင်း ဖော်ပြပေးခြင်းနှင့် ထိုရောင်းမည့် ပစ္စည်းများအား ဝယ်သူများမြင်နိုင်ရန် နည်းပညာဖြင့် ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ရောင်းချသူများအတွက် ငွေကြေးရှင်းတမ်းကိုလည်းနည်းပညာဖြင့် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့် ရောင်းချသည့်ကုန်ပစ္စည်းများအနေဖြင် စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေး ဥပဒေကြောင်းအရ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်မှုမရှိသည့် ရောင်းချသူများအား အရေးယူဆောင်ရွက် ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ရောင်းသူများထံသို့ အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်း၊ အကြိမ်ကြိမ်မှာယူပြီး ရွေးချယ်မှုမရှိသည့် ဝယ်သူများ၏လိပ်စာကို စိစစ်မှတ်တမ်းတင်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းဝယ်သူများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အသိပေးအချက်အလက်များကို ရောင်းချသူများထံ ပေးပို့မည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် တင် ရောင်းချလိုသည့် အွန်လိုင်းရှော့ပင်းလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် မှတ်ပုံတင်မူရင်း/မိတ္တူ၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင် မူရင်း/မိတ္တူနှင့် သန်းခေါင်စာရင်းမိတ္တူတို့ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပြီး စည်ပင်လိုင်စင်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေ ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ကြေးအဖြစ် ကျပ် ၃ဝဝဝဝနှင့် လစဉ်ကြေးအဖြစ် တစ်လလျှင် ကျပ် ၅ဝဝဝ ပေးသွင်းရ မည်ဖြစ်ကာ ကုမ္ပဏီလိုင်စင်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နေသည့် အွန်လိုင်းရှော့ ပင်းလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် မှတ်ပုံတင်ကြေးအဖြစ် ကျပ် ၅ဝဝဝဝ နှင့် လစဉ်ကြေးအဖြစ် တစ်လလျှင် ကျပ်တစ်သောင်း ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
မူပိုင်ခွင့်အမှုတွင် နယူးဇီလန် နိုင်ငံရေးပါတီကို ရက်ပ်ပါ အမ်မီနမ် အနိုင်ရ